FAQ - Chengdu Mengsheng Electronics Co., Ltd.
Inona avy ireo fanasokajiana sy fepetra momba ny sivana?
(1) sivana ambany
Avy amin'ny 0 ka hatramin'ny F2, ny toetran'ny amplitude-frequency dia fisaka, izay mety hahatonga ny singa matetika eo ambanin'ny F2 handalo saika tsy voafehy, fa ny avo kokoa noho ny F2 kosa dia attenuated be.
(2) sivana avo lenta
Mifanohitra amin'ny sivana ambany-pass, ny toetrany amplitude-frequency dia fisaka manomboka amin'ny matetika F1 ka hatramin'ny tsy manam-petra.Izy io dia mamela ny singa matetika amin'ny mari-pamantarana ambony F1 handalo saika tsy misy dikany, fa ireo ambany F1 kosa dia hihena be.
Ny passband dia eo anelanelan'ny F1 sy F2.Izy io dia mamela ny singa matetika amin'ny mari-pamantarana ambony kokoa noho ny F1 sy ambany noho ny F2 handalo tsy voafehy, fa ny singa hafa kosa dia attenuated.
Mifanohitra amin'ny fanivanana bandpass, ny tarika fiatoana dia eo anelanelan'ny frequence F1 sy F2.Mampihena ny singa matetika amin'ny mari-pamantarana ambony noho ny F1 ary ambany noho ny F2 izy io, ary ny ambiny amin'ireo singa matetika dia mandalo saika tsy voafehy.
Inona ny sivana herinaratra EMI?
Electromagnetic interference (EMI) power filter dia fitaovana passive misy inductance sy capacitance.Izy io dia miasa toy ny sivana roa ambany, ny iray manalefaka ny fitsabahana amin'ny fomba mahazatra ary ny iray manalefaka ny fitsabahana amin'ny fomba hafa.Mampihena ny angovo rf ao amin'ny tarika fiatoana (matetika mihoatra ny 10KHz) ary mamela ny fatran'ny herin'aratra mandalo amin'ny kely na tsy misy attenuation.Ny sivana herinaratra EMI no safidy voalohany ho an'ny injeniera amin'ny famolavolana elektronika hifehy ny EMI tarihina sy taratra.
Inona ny fitsipiky ny fiasan'ny EMI power filter?
(A) Amin'ny fampiasana ny toetra mampiavaka ny capacitor mandalo matetika avo sy ambany matetika fitokanana, ny avo matetika fitsabahana amin'izao fotoana izao ny velona tariby sy ny tsy miandany tariby dia nampidirina ao amin'ny tany tariby (mahazatra fomba), na ny avo matetika fitsabahana amin'izao fotoana izao ny velona tariby dia nampidirina. amin'ny tariby tsy miandany (mode differential);
(B) Taratra ny fitsabahana matetika amin'izao fotoana izao miverina amin'ny loharanon'ny fitsabahana amin'ny fampiasana ny toetran'ny impedance amin'ny coil inductor;
Inona no tokony hojerena amin'ny fametrahana sivana?
Mba hampihenana ny fanoherana amin'ny tany, ny sivana dia tokony hapetraka eo amin'ny tampon'ny metaly conductive na mifandray amin'ny teboka eo akaiky eo amin'ny alàlan'ny faritry ny tany voarandrana mba hialana amin'ny impedance lehibe amin'ny tany vokatry ny tariby manify.
Ahoana ny fisafidianana sivana herinaratra?
Fanondroana maromaro no tokony hodinihina rehefa misafidy sivana tariby herinaratra.Ny voalohany dia ny voltase / naoty amin'izao fotoana izao, arahin'ny fatiantoka fampidirana, ny leakage (tsy mandinika ny haben'ny leakage ny sivana dc), ny haben'ny rafitra, ary ny farany dia ny fitsapana voltase.Satria ny atin'ny sivana amin'ny ankapobeny dia vilany, ny toetran'ny tontolo iainana dia tsy olana lehibe.Na izany aza, ny toetran'ny mari-pana amin'ny akora potting sy ny capacitor sivana dia misy fiantraikany amin'ny toetran'ny tontolo iainana amin'ny sivana famatsiana herinaratra.
Ny habetsaky ny sivana dia voafaritra amin'ny alàlan'ny inductance ao amin'ny faritra sivana.Arakaraky ny habetsahan'ny coil inductance no lehibe kokoa ny habetsaky ny sivana.